Yaalii fonqolcha mootummaarratti gabaasalee waldhahan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Mirgarraa gara bitaatti Janraal Sa'aara Makonniin, BJ Asaaminaw Tsiggee fi Dr Ambaachaw Makonniin
Haleellaan kan eegale Guyyaa sanbataa galgala ture. Odeessaaleen gara Naannoo Amaaratii bahaniis kan eegaman hinturre. Akka motummaa Naannoo Amaaraa irratti 'yaaliin fonqolchaa' taasifame himame.
Miidhaa Naannoo Amaaraatti qaqabeen pirezidaantiin naannichaa Ambaachaw Makonniin (PhD) akka miidhaman dhagahame. Ittaansee gorsaan isaanii Obbo Izeez Waasees akka hubaman dhagahame.
Bulchiinsa Naannoo Amaaraa irratti 'yaalii fonqolchaa' taasifamu TV biyyaaleessaa irratti bahuun kan himan ammoo Waajjira MM'tti Itti gaafatamaa Prees Sekreetarii Obbo Nugusu Xilaahun turan.
Reeffi Birgader Janaraal Asaamminew Tsiggee gara Laalibalaa geeffame
Kun ta'ee sa'aatiiwwan muraasa keessatti ammoo Finfinneerraa oduun gaddisiisaan biraa dhagahame; Janaraal Se'areefi hirriiyaansaanii kan soramarra turan ajjeeffamuun dhagahame.
Ibsa Obbo Nugusuu Xilaahun TV irratti dubbataniin alatti, Paartiin Dimokraatawaa Amaaraa (ADP)n ibsa galgala keessa kenneen, 'yaalii fonqolchaa taasifame' duuba Birgaadar Janaraal Asaaminaw Tsiggee jiraachu beeksiise.
Midiyaalee hawaasaa irratti namoonni waanuma ni ta'a jechuun yaadan hunda barreessuu eegalan.
Garuu gara halkan walakkaa Ministirri Muummee Abiy Ahimad uffannaa loltummaa uffachuun TV irratti dhiyaachuun kanneen miidhaman ilaalchisee gadda itti dhagahame himan. Uummannis akka tasgabbaa'uuf waamicha taasisan.
Galgaluma sanattis tajaajilli intarneetii adda cituusaa gara Finfinneerraa dhagahame.
Achinis haleellaan magaalaa Baahirdaariitti gaggeeffame osoo qondaaltoonni naannichaa walgahiirra jiranu raawwatamu beeksisan.
Tibba yaalii fonqolchiichaatti kanneen miidhaan irra gahee keessaa 'muraasni du'usaanii fi kanneen hafan miidhamu' ministirri muummee kan himan yoo ta'u, eenyuu akka miidhame ibsi kennan hinturre.
Ittaansuunis Janaraal Se'areen Finfinneetti miidhaan irra qaqabu beeksisan. Miidhaan Finfinneetti janaraalicha irratti raawwatamees yaalii Baahirdaariitti taasifameen hidhata qaba jedhan.
Janaraalichi wayita rukutamaniitti rakkina Naannoo Amaaratti uumamee to'achuuf yaala akka turan kan dubbatan MM, ergamtoonni Janaraalichaa fi hirriyaasaanii irratti miidhaa raawwachu hima.
Dilbata maaltu ta'e
Dilbata ganama keessa odeeffannoowwan hedduun walitti fufiinsaa dhagahaman. Janaraal Se'areefi Janaraal Gezaa'iin ajjeefamusaanii himuuf 'Dimtsa Wayaanee' kan durse hinturre. Takka turamee ammoo, buufata TV biyyaaleessaatiin, pirezidaantiin Naannoo Amhaaraa Ambaachaw Makonniin fi Gorsaan isaanii Obbo Izeez Waasee du'unsaanii ibsame.
Waajjirri Ministira Mummeetiis ibsan kennaa jechuun oggeessoota midiyaatiif waamicha dabarse.
Ibsichis Afaan Amhaaraa fi Ingiliziitiin taasifame. Dubbi himtoonni waajjirichaa gaazexessitoota irraa gaaffii fudhachuuf fedha hinagariisinees, ibsichaan Janaraal, , Gezaa'ii fi Ambaachoon du'usaanii mirkanneessan.
Namni Janaraal Se'are fa'irratti haleellaa raawwatees miidhamulleen to'annoo jala olfameera jedhame. Yaalii fonqolchaa Naannoo Amaaraatti gaggeefamees Birgadar Janaraal kan dhiheenya hidhaadhaa hiikameen ta'uun himame.
Itti aanaan pirezidaantii Obbo Laaq Ayaaleew eeggataa pirezidaantii naannichaa ta'un akka tajajilanis kan dhagahame ibsuma sanaan.
Dilbata guyyaa keessa oduuwwan haaraa dhagaham keessaa tokko du'a abbaa alangaa naannichaa Obbo Migbaaruu Kabbadaati.
Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira Ijaarsaa fi Nageenya Uummataa Naannichaa Obbo Gadabee Hayiiluu BBC'tti akka himaniitti, 'Pirezidaaantii naannichaa dabalatee aanga'oonni olaanoo naannichaa osoo gamagama gaggeessaa jiranu ture, Birgaadar Janaraal Asaaminaw Tsiggee humnoota addaaatiin dabalamanii dhaquun jalqaba eegdoota pirezidaantichaa, itti aansuun aanga'oota irratti dhukaasuun sadan ajjeessaniiru, jechuun ibsan.
Itti dabaluunis namni yaalii fonqolchichaa duuba jiru kun eessa akka jiran akka hinbeekamne dubbatan.
Odeeffannoowwan wal faalleessan irra caala dhagahamu kan eegalan guyyaa Wiixataati. Jalqaba kan dhagahame Obbo Migbaaruu Kabbadaa du'usaaniiti.
Hunda caala kan dhagahame ajjeefamuu Birgaadar Janaraal Asaaminaw Tsiggee ture. TV biyyaaleessaa ETV ture ajjeeffamu janaraalichaa kan hime.
Birgaadar Janaraal Asaaminaw mandara magaalaa Baahiradaar alatti argamtuufi Zaanzalamaa jedhamtuutti dhukaasa taasifameen akka ajjeefaman dhagahame.
Oduun gara biraa ammoo kan Komishinarii Poolisii Federaalaa irra dhagahame ture. Odichi ammoo eegduufi kan Janaraal Se'are fi janarala isaan waliin ture ajjeessee du'unsaa dhagahame. Oduu kanas ture hedduun kan bitaa itti gale.
Miidhamuus to'annoo jala olfamee jira jedhamuun himamee kan ture namni kun amma ofii of ajjeesseera jedhame ibsame. Attamiin namni to'annoo jala jiru ofi ajjeessuu danda'een, gaaffi namoota hedduu ta'e.
Haa ta'u malee booda keessa ammoo buufata TV biyyaaleessaatiin namtichi of ajjeesse jedhame lubbuun argamu himamee dhiifama gaafatame.
Ragaalee baayyee garaa garaa...
Yaaliin fonqolchaa sadarkaa naannootti gaggeefamuu ni danda'ama gaaffin jedhuu kan hedduun walgaafachisee ta'ee jira.
Dhaabbanni Sochii Biyaalessa Amhaaraa (ABIN) dhimmicha haleellaadha malee 'yaalii fonqolcha motummaa' miti jechuun mormeera.
Obbo Gadabeen garuu dhimmicha yoo ibsan akkas jedhanii ture, ''sa'aatii 11 irratti aanga'oonni muraasni walgahiif barbaadamuun gara galmichaa akka dhaqan, achinis akka galan erga mirkaneeffameen booda humna ijaarameen seenuun dhukaasa banuun namoonni akka hinsochonee taasifamu beeksiiseera.''
Obbo Gadabe itti dabaluunis, ''wayita sanatti ani walgahiicharra hinturre. Hin waamamnees. Sanbata hanga sa'aatii 7tti biiroo Birgaadar Janaraal Asaaminaw ture. Gara sa'aatii 9- 11tti hojii biraa waanan qabuuf hojiirran ture. Isaan boodas dhukaasa olaanaa dhagahe,'' jechuun haalicha ibsa.
Akka Gadabeen jedhanitti haleellichi irra caalaa waajjira pirezidaantichaa irratti raawwatame, biiroon nageenyaa, poolisii fi bulchiinsa akkasumas waajjirri dhaaba ADP irrattis halleellaan raawwatamu himaniiru.
Akkasumas humnootiin nageenya hedduun ajjeefamusaaniikan himaniiru Obbo Gadabeen.
Angaa'oonni walgahicharra turan torba ta'usaanii himaniiru. Kanneen ajjeefaman afraniin alattis Obbo Yoohaannis Buwayaalew, Obbo Laaqawu Alabal, fi Abrahaam Alahanyi lubbuun hafuusaanii dubbataniiru.
Hokkorri Hawaasaatti eegale miidhaa maalii qaqqabsiise?